အမျိုးသား ကျန်းမာရေး - Thiloyarmay ׀ ဖိုမ ဆက်ဆံရေးနှင့် မျိုးဆက်ပွား ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ မေးလိုရာ
Thiloyarmay ׀ ဖိုမ ဆက်ဆံရေးနှင့် မျိုးဆက်ပွား ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ မေးလိုရာ > ကျွန်မတို့ကိုမေးမြန်းနိုင်ပါတယ် > အမျိုးသား ကျန်းမာရေး
ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းက အမျိုးသား မျိုးပွားမှုကို အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပါသလား?
ဆေးလိပ်စီးကရက်သောက်သုံးခြင်းက မျိုးပွားနိုင်စွမ်းကို လျော့ကျစေပြီး ဆေးလိပ်အလွန်အကျွံသောက်သုံးသူတွေအနေနဲ့ သုက်ကောင်ထုတ်လုပ်မှု ၂၀% အောက်လျော့နည်းပြီး ပုံမှန်ပုံစံမဟုတ်တဲ့ သုက်ကောင်အရေအတွက်ထုတ်လုပ်မှုကတိုးလာပြီး သားဥမျိုးအောင်မှုက ပိုခဲယဉ်းလာပါတယ်။
လေ့လာတွေ့ရှိထားတဲ့ အထောက်အထားအသစ်များအရ ဆေးလိပ်ဆေးရွက်ကြီးမှာပါတဲ့ ဓါတုပစ္စည်းကြောင့် သုက်ကောင်မှာပါဝင်တဲ့ DNA မျိုးရိုးဗီဇပစ္စည်းကပျက်စီးသွားပြီး ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဖို့ အခွင့်အရေးကို ပိုမိုလျော့ကျစေပါတယ်။ သုက်ကောင်မှာ သင့်တင့်မျှတတဲ့ ပရိုတင်း၂ မျိုးပါဝင်ပေမဲ့ ဆေးလိပ်သောက်သုံးသူတွေမှာတော့ လေ့လာတွေ့ရှိချက်အရ ပရိုတင်း၂ မျိုးထဲက ၁ မျိုးကိုသာ အနည်းငယ်သယ်ဆောင်တာကို တွေ့ရှိရပါတယ်။ ဒီလို မညီမျှမှုက သုက်ကောင်အနေနဲ့ သားဥနဲ့ သန္ဓေအောင်ဖို့ ခက်ခဲပြီး သန္ဓေအောင်ရင်တောင်မှ ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျဖို့ အခွင့်လမ်းပိုများပါတယ်။
သင့်မှာ အရင်ကမျိုးပွားမှုပြဿနာရှိပြီး ကလေးယူဖို့ ကြိုးစားနေရင် ဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ အကြံပေးပါတယ်။ သုက်ကောင်က အရွယ်အစားပြည့်ပြည့်ဝဝ ဖွံ့ဖြိုးကြီးထွားဖို့ ၃လအနည်းဆုံးလိုအပ်တာကြောင့် သင်ကကိုယ်ဝန်ရဖို့ ကြိုးစားနေတယ်ဆိုရင်တော့ မကြိုးစားခင် ၃ လအနည်းဆုံး ဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ အကြံပြုထောက်ခံထားပါတယ်။
သက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပေမဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှုက ရှင်းလင်းသေချာမှုမရှိပါဘူး။လေ့လာတွေ့ရှိထားချက်များအရ ဘီယာ၅ယူနစ်(၁ယူနစ်က ပုံမှန် ဘီယာအရွယ်အစား)က၁ပတ်ကို အမျိုးသားတစ်ယောက်ရဲ့ သုက်ကောင်အရည်အသွေးကို လျော့ကျစေနိုင်ပါတယ်။လေ့လာချက်များအရ အရက်ပိုမိုသောက်သုံးလေ သုက်ရည်ပိုမိုအားနည်းလေပါပဲ။၁ပတ်ကို အရက်၂၅ယူနစ် ထက်ပိုသောက်သုံးတဲ့ အမျိုးသားတွေအတွက် သုက်ရည်ထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ အရည်အသွေးအရေအတွက် အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေက သိသာအထင်ရှားဆုံးပါပဲ။လေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေက အရက်အရမ်းသောက်သုံးတဲ့သူတွေအတွက် ခံစားရနိုင်တဲ့ ရလဒ်အကျိုးဆက်တွေကိုပြသပေးပါတယ်။
အရက်သေစာသောက်စားပျော်ပါးတာနဲ့ ပုံမှန်အရက်အလွန်အကျွံသောက်သုံးတာတွေက သုက်ရည်ကို ထိခိုက်စေပြီး ကျန်းမာရေးနဲ့ အခြားကိစ္စရပ်တွေကို သက်ရောက်စေပါတယ်။အရက်သောက်သုံးခြင်းက သုက်ရည်အရေအတွက်ကိုသာမက တက်စတိုစတီရုန်းအခြေအနေ၊သုက်ရည် ထုထည်ပမာဏ၊ပုံမှန်အရွယ်အစားနဲ့ ရွေ့လျားတဲ့ သုက်ကောင်အရေအတွက် တွေကိုပါ သက်ရောက်စေပါတယ်။
လိုအပ်ပါတယ်။သင်ရေချိုးတဲ့အခါ နေ့စဉ် ရေနွေးနဲ့ ဆေးကြောသန့်စင်သင့်ပါတယ်။သင့်မှာယောက်ျားတန်ဆာထိပ်ဖုံးအရေပြား ရှိရင် ညင်ညင်သာသာနဲ့နောက်ကိုဆွဲပြီး အောက်ဖက်ကို ဆေးကြောသန့်စင်သင့်ပါတယ်။ယောကျာ်းတန်ဆာကို နေ့စဉ်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့ လိုအပ်တာပြီး မလုပ်ရင် ချောကျိကျိ အရာတွေဖြစ်စေပါတယ်။ Smegmaဆိုတာ နေ့စဉ်သန့်ရှင်းရေးမလုပ်တာကြောင့် ထွက်လာတဲ့ သဘာဝချောဆီဖြစ်ပါတယ်။ မဆေးကြောမသန့်စင်ပဲ ချန်ထားခဲ့ရင် ဘက်တီးရီးယားပိုးမွှားတွေပေါက်ပွားရာနေရာဖြစ်လာပြီး မကောင်းတဲ့ အနံ့အသက်တွေစတင်ထွက်လာပါတယ်။သင့်အရေပြားပေါ်မှာ ဘက်တီးရီးယားပိုးမွှားအချို့ရှိတာက ပုံမှန်ဖြစ်ပေမဲ့ ယောက်ျားလိင်တံပေါ်မှာ ဘက်တီးရီးယားပိုးမွှားတွေ အမြောက်အမြားရှိတာက ကပ်ပါးရောဂါလိုမျိုး အလွန်နာကျင်ပြီး သက်တောင့်သက်သာမဖြစ်ပါဘူး။
ဘယ်အရာတွေက အမျိုးသား မျိုးဆက်ပွားပြဿနာရပ်တွေကို ဖြစ်စေတာလဲ?
အမျိုးမျိုးသော ဆေးပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်တွေက အမျိုးသားတွေ ကို မျိူးဆက်ပွားပြဿနာ ဖြစ်လာစေပါတယ်။
ဟိုက်ပိုသဲလမတ်(စ်) (သို့) ပီကျုထရီဂလင်း ပြဿနာ – ဒါတွေက ဦးနှောက်အစိတ်အပိုင်းတွေဖြစ်ပြီး တက်စတိုစတီရုန်းနဲ့ သုက်ကောင်တွေ ထုတ်လုပ်ဖို့ ဝှေးစေ့ကို လှုံဆော်ပေးပါတယ်။
အသက်အရွယ်ကလည်း အခန်းကဏ တခုအနေနဲ့ ပါဝင်ပါတယ်။သုက်ကောင် ရွေ့လျားနိုင်တဲ့ စွမ်းရည်နဲ့ ပုံမှန်သုက်ကောင် အချိုးအဆက အမျိုးသားတယောက်ရဲ့ မျိုးဆက်ပွားပြဿနာတွေကို သက်ရောက်စေပြီး အသက်အရွယ်အရ လျော့ကျစေပါတယ်။အချို့ သုတေသီများရဲ့ တွေ့ရှိချက်များအရ အသက်၃ဝပိုင်း ၄၀ပိုင်း အမျိုးသားတွေမှာ သန္ဓေအောင်တာက လူငယ်တွေထက် အချိန်ပိုကြာပါတယ်။
ကျန်းမာတဲ့ သုက်ရည်ကို ထုတ်လုပ်ဖို့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းက ဘာပါလဲ?
ကျန်းမာတဲ့ သုက်ရည်ကို ထုတ်လုပ်ဖို့ ရိုးရှင်းတဲ့ အဆင့်လေးတွေ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်
ကိုယ်အလေးချိန်ထိန်းသိမ်းပါ။သုတေသီများရဲ့တွေ့ရှိချက်များအရ BMIတိုးလာတာဟာ သုက်ကောင်ထွက်နှုန်းနဲ့ သုက်ကောင်ရွေ့လျားမှု လျော့နည်းတာနဲ့ ဆက်စပ်နေပါတယ်။
ကျန်းမာရေးနဲ့ ပြည့်စုံတဲ့ အစားအသောက်စားသုံးပါ။အင်တီအောက်ဆီဒင့် ပြည့်ဝတဲ့ အသီးအနှံ ဟင်းသီးဟင်းရွက်အမြောက်အမြား ရွေးချယ်စားသုံးပါက သုက်ကောင်ကျန်းမားရေးကို အထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်။
လိင်ဆက်ဆံရာကတဆင့် ကူးစက်နိုင်တဲ့ ရောဂါပိုးတွေကိုကာကွယ်ပါ။လိင်ဆက်ဆံရာကတဆင့် ကူးစက်နိုင်တဲ့ရောဂါပိုးတွေဖြစ်တဲ့ ကလိုင်မိုင်ဒီးယားနဲ့ ဆီးပူညောင်းကျရောဂါတွေဟာ အမျိုးသားတွေအတွက် သားမြုံရတဲ့ အကြောင်းရင်းပါပဲ။သင့်ကိုယ်သင် ကာကွယ်ဖို့ လိင်ဆက်ဆံဖော်အရေအတွက်ကို ကန့်သတ်ပြီး လိင်ဆက်ဆံတဲ့အချိန်တိုင်း ကွန်ဒုံးအသုံးပြုပါ(သို့) ရောဂါပိုးမရှိတဲ့ အဖော်နဲ့ တလင်တမယားစနစ်နေထိုင် ကျင့်သုံးပါ။
စိတ်ဖိစီးမှုကိုစီမံခန့်ခွဲပါ။စိတ်ဖိစီးမှုကို လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုတွေကို လျော့ကျစေပြီး သုက်ရည်ထုတ်လုပ်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ ဟော်မုန်းတွေကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေပါတယ်။
လှုပ်ရှားပါ။သင့်တင့်မျှတတဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာလှုပ်ရှားမှုက အားကောင်းတဲ့ အင်တီအောက်ဆီဒင့် အခြေအနေကိုတိုးမြှင့်စေပြီး သုက်ကောင်ကိုကာကွယ်ပေးပါတယ်။
ဝှေးစေ့တစ်ခုက အခြားတစ်ခုထက် အောက်ပိုကျနေတာ ဘာကြောင့်လဲ?
စိုးရိမ်စရာမရှိပါဘူး အားလုံးအတူတူပါပဲ။ ၁ဝဝ% က ပုံမှန်ပါပဲ။ တစ်ခုနဲ့ တစ်ခုရိုက်မိတာကာကွယ်ပေးပါတယ်။
ဆေးပညာပိုင်းဆိုင်ရာ(သို့) ကျန်းမားရေးဆိုင်ရာ အကြောင်းရင်းတွေကြောင့် ရွှေပန်းဖြတ်တဲ့ကိစ္စကို ဆက်ပြီး အချေအတင်တိုက်ခံငြင်းဆိုကြပါတယ်။ကိုယ်ပိုင် ဆုံးဖြတ်ရတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်ပြီး ဘယ်ဆရာဝန်မှ သူ့လူနာကိုယ်စားမလုပ်ပေးပါဘူး။
အမေရိကန် ကလေးသူငယ်ကုသရေး အကယ်ဒမီကတော့ ကျန်းမားရေးအကျိုးကျေးဇူး အားလုံးက ဆိုးကျိုးတွေထက် ပိုများပါတယ်လို့ပြောထားပါတယ်။ မဖြစ်မနေလုပ်ရမယ်လို့တော့ အကြံပြုထောက်ခံထားခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ သက်ကြီးရင့်နေတဲ့ ယောကျာ်းလေးတွေ အမျိုးသားတွေမှာ လိင်တံရောဂါပိုးကူးစက်တာကို ကုသဖို့ ရွှေပန်းဖြတ်တာကို အကြံပြုထောက်ခံထားပါတယ်။
သင်က အလွန်အမင်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို အာသာဆန္ဒဖြေဖျောက်နိုင်ပါသလား?
တကိုယ်တည်း အာသာဆန္ဒဖြေဖျောက်တာက အန္တရာယ်ကင်းပေမဲ့ သင်အလွန်အကျွံလုပ်ရင် သင့်မျိုးပွားအင်္ဂါကိုနာကျင်စေပါတယ်။ အမျိုးသားတွေက အချိန်တိုလေးတွင်းမှာ အာသာဆန္ဒဖြေဖျောက်တာကို အလွန်အမင်းလုပ်ရင် တစ်သျှူးထဲမှာရှိတဲ့ အရည်ကြည်ကြောင့် ဖြစ်လာတဲ့ ယောက်ျားလိင်တံဖောရောင်တာတွေ ဖြစ်စေပါတယ်။ ဖောရောင်တာက ၁ရက်(သို့) ၂ရက်အတွင်းမှာ ပျောက်ကွယ်သွားပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အာသာဆန္ဒဖြေဖျောက်တာဟာ ကျန်းမာရေးနဲ့အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်ပြီး ပုံမှန်ပြုလုပ်လို့ရတဲ့ အရာဖြစ်ပေမဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အာသာဆန္ဒဖြေဖျောက်တာက သင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်တစ်ခုအနေနဲ့ သင့်နေ့စဉ်ဘဝကို ဝင်ရောက်စွက်ဖက်နေရင်တော့ ကျွမ်းကျင်သူဆရာဝန်တွေနဲ့ ပြောဆိုတိုင်ပင်ဖို့တော့ လိုပါလိမ့်မယ်။
တကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းက သုက်ကောင်အရေအတွက်ကို သက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပါသလား။
တကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းက အမျိုးသားတစ်ယောက်ရဲ့သုက်ကောင်ထုတ်လုပ်နိုင်မှုစွမ်းရည်အပေါ် သက်ရောက်မှုမရှိနိုင်ပါဘူး။ အမျိုးသားတွေက သုက်ရည်အဆက်မပြတ်ထုတ်လုပ်တာကြောင့် သုက်ရည်မကုန်ဆုံးပါဘူး။အမျိုးသားတယောက် သုက်ရည်အပြင်စွန့်ထုတ်ပြီးတဲ့နောက် နောက်တကြိမ် သုက်ရည် မစွန့်ထုတ်ခင် အချိန်ယူရပါတယ်။ဒါက ပုံမှန်ဖြစ်ပြီး သုက်ရည်ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဘာမှမှားယွင်းမှုမရှိပါဘူး။
အမျိုးသားတစ်ယောက်ခြေထောက်ပိုကြီးလာလေ သူရဲ့လိင်တံကလည်း ပိုကြီးလာတယ်ဆိုတာမှန်ကန်ပါသလား?
သင့်ရဲ့ ယောက်ျားလိင်တံ အရွယ်အစားက သင့်ရဲ့ ခြေဖဝါး၊လက်၊လက်ချောင်းတွေ၊နှာခေါင်း အခြားခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတွေနဲ့ ဆက်စပ်မှုမရှိပါဘူး။
ကျိုးနိုင်ပါတယ်။ Tunica albuginea လို့ခေါ်တဲ့ လိင်တံမာတောင့်မှုကိုဖြစ်စေတဲ့ အမျှင်ထူ ကြွက်သားတစ်သျှူးအလွှာထူကြီး ရှိပါတယ်။
ယင်းတစ်သျှူးအလွှာက သွေးတွေနဲ့ ပြည့်နေပြီး အထဲက သွေးကိုထိန်းသိမ်းပေးခြင်းဖြင့် လိင်တံမာတောင့်တာကိုဖြစ်စေပါတယ်။ လိင်ဆက်ဆံနေစဉ်အတောအတွင်း အဲ့ဒီ အလွှာပေါက်သွားရင် ယောက်ျားလိင်တံ ကျိူးတာတွေဖြစ်ပေါ်ပါတယ်။ အလွှာပေါက်သွားတဲ့အခါ tunica albuginea ပေါက်ပြဲသွားတဲ့အခါ ထိန်းမထားနိုင်တော့ဘဲ အဲ့ဒီကနေ သွေးထွက်လာပါတယ်။
များသောအားဖြင့် ပြင်းပြင်းထန်ထန် နာကျင်လာတတ်ပြီး လိင်တံထောင်မတ်မှုလည်း မရှိတော့ပါဘူး။ ရလဒ်ကတော့ ပွန်းပဲ့တာ၊ဖူးရောင်တာတွေဖြစ်လာပြီး အရေးပေါ်ခွဲစိတ်မှုလိုအပ်ပါတယ်။
ပုံမှန်သုက်ရည်က ဘာနဲ့ တူလဲ?ကျွန်တော် ဘယ်အချိန်မှာ စိုးရိမ်သင့်လဲ?
သုက်ရည်က ပုံမှန်အားဖြင့် ပျစ်နှစ်ထူထဲပြီး အဖြူရောင်ဖြစ်ပါတယ်။ ထူတာပျစ်တာ အမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပါတယ်။ သုက်ရည်စွန့်ထုတ်တဲ့အခါ နာကျင်မှုရှိလာရင် သင့်ရဲ့ သုက်ရည်ထဲမှာ သွေး၊စိမ်းဖန့်ဖန့်အရောင် (သို့) အနံ့အသက်ဆိုးရွားရင် ဆရာဝန်နဲ့ သွားရောက်ပြသပါ။
ရွှေပန်းဖြတ်တာက လိင်တံထိပ်ဖျားမှာ ဖုံးအုပ်ထားတဲ့ အရေပြားကို ခွဲစိတ်ဖယ်ရှားတာပါ။ရွှေပန်းဖြတ်တာက ကမ္ဘာအနှံ့မှာ မွေးကင်းစ ယောက်ျားလေးတွေအတွက် လုပ်လေ့ရှိပါတယ်။မွေးပြီး ရွှေပန်းဖြတ်တာက ဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ ပိုပြီးရှုပ်ထွေးပါတယ်။
အချို့မိသားစုတွေအတွက် ရွှေပန်းဖြတ်တာက ဘာသာရေးအရ(သို့)ယဉ်ကျေးမှု ရိုးရာဓလေ့အရလုပ်လေ့ရှိပါတယ်။အချို့တွေအနေနဲ့ ရွှေပန်းဖြတ်တာက မိသားစုဓလေ့ထုံးတမ်းအရ၊ တစ်ကိုယ်ရည်ကျန်းမာသန့်ရှင်းရေးအရ(သို့) ကျန်းမာရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုအရ လုပ်ဆောင်ကြပါတယ်။အချို့သူတွေအတွက်က ရွှေပန်းဖြတ်တာက မလိုအပ်ပါဘူး။ရွှေပန်းဖြတ်ပြီးနောက် မဖြတ်ရသေးတဲ့လိင်တံပုံစံလိုမျိုး ပြန်ပြုပြင်ဖို့က မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။
-ရွှေပန်းဖြတ်တာက လိင်တံကို ဆေးကြောသန့်စင်ဖို့ ပိုမိုရိုးရှင်းလွယ်ကူပါတယ်။ရွှေပန်းဖြတ်ထားတဲ့လိင်တံ ထိပ်ပိုင်းအရေပြားအောက်ခြေကို ဆေးကြောသန့်စင်ခြင်းက ယေဘုယျအားဖြင့် လွယ်ကူပါတယ်။
-ဆီးသွားလမ်းကြောင်းရောဂါပိုးကူးစက်ခြင်းမှ လျော့နည်းလာခြင်း ရွှေပန်းဖြတ်ထားတဲ့ အမျိုးသားတွေမှာတော့ ဆီးသွားလမ်းကြောင်းရောဂါပိုးကူးစက်ခြင်းက လျော့နည်းပေမဲ့ ရွှေပန်းမဖြတ်ထားတဲ့ အမျိုးသားတွေမှာတော့ ရောဂါပိုးကူးစက်မှု ပိုအဖြစ်များပါတယ်။ပြင်းထန်တဲ့ ရောဂါပိုးကူးစက်မှုတွေက နောက်ပိုင်းမှာ ကျောက်ကပ်ပြဿနာဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
-လိင်ဆက်ဆံရာကတဆင့်ကူးစက်နိုင်တဲ့ရောဂါပိုး ဖြစ်ပွားမှု လျော့နည်းလာခြင်း ရွှေပန်းဖြတ်ထားတဲ့ အမျိုးသားတွေမှာ HIVအပါအဝင် လိင်ဆက်ဆံရာကတဆင့်ကူးစက်နိုင်တဲ့ရောဂါပိုး ဖြစ်ပွားမှုပိုမိုလျော့ကျလာပြီး ကွန်ဒုံးအသုံးပြုခြင်း အခြားသားဆက်ခြားပစ္စည်းအသုံးပြုခြင်းက ရောဂါပိုးကူးစက်မှုကိုလျှော့ချပေးပါတယ်။
-လိင်တံပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာ ကာကွယ်မှု ရွှေပန်းမဖြတ်ထားတဲ့ လိင်တံထိပ်ဖုံးအရေပြားက အထဲပြန်ဝင်ဖို့မဖြစ်နိုင်သလိုခက်ခဲပါတယ်။လိင်တံခေါင်းပိုင်း ဖူးရောင်တာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အမျိုးသားလိင်တံပိုင်းဆိုင်ရာ ကင်ဆာဖြစ်ပွားမှု လျှော့ချပေးခြင်း- လိင်တံကင်ဆာဖြစ်တာရှားပေမဲ့ ရွှေပန်းဖြတ်ထားတဲ့ အမျိုးသားတွေမှာတော့အဖြစ်နည်းပါတယ်။ဒါ့အပြင် ရွှေပန်းဖြတ်ထားတဲ့အမျိူးသားတွေနဲ့ လိင်ဆက်ဆံဖော်အမျိုးသမီးတွေမှာလည်း သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ အဖြစ်နည်းပါတယ်။
သွေးခဲသွေးပိတ်ဆို့တာတွေရှိရင် ရွှေပန်းဖြတ်တာက ရွေးစရာနည်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။ရွှေပန်းဖြတ်တာက မျိုးဆက်ပွားကိစ္စရပ်တွေကို သက်ရောက်မှုမရှိသလို အမျိုးသားတွေအတွက် သူတို့အဖော်တွေနဲ့ လိင်ဆက်ဆံတဲ့အခါ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကျေနပ်မှု တိုးလာတာတွေ(သို့)နည်းစေတာမျိုးတွေလည်း မရှိပါဘူး။